Xasuustii maanta oo kale iyo Xasuuqii Etoobiya ka geesteen Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xasuustii maanta oo kale iyo Xasuuqii Etoobiya ka geesteen Muqdisho
Maanta oo kale 29/3/2007 waxay ahayd 14sano kahor maalin magalada Muqdisho oo idil qiiq.olol,iyo rasaas ay Isku badashay. Cidaamadii Ethiopia ayaa istijaabiyey iskuna dayey Ineey Isku fidiyaan Magalada Muqdisho. Waxay kasoo kala ruqaansadeen Xarumihii Gaashaandhiga Iyo Asluubta, dhanka kalena waxay kasoo ruqaansadeen Villa Somalia.
Subaxaas waxaa ugu darnaa oo ay rasaastu ka bilowatay wadada dheer ee Warshadaha Iyo wadad dheer ee kasoobaxda Villa Somalia ilaa Isbartiibada Muqdisho Staduim.
Ciidanka Ethiopia ee kasoo baxay Villa Somalia waxay rabeen iney dagaan ama saldhigtaan Isbartiibada Jidka ayaase loo galay isgooska #Calikamiin iyo wadada #SchoolmaxamuudXarbi aada baa rasaas looga biloway, Xaafadii #Xamarbile way isla oloshay sidoo kale wadada Warshadaha ayaa loo galay 2gaari ee uuralada ah waxaa lagu gubay Machadkii Simad agtiisa. Waaxaana gawaarida mid ka mid ah gubay nin markii Danbe ay Shabaabku dileen oo dagaalyahan wayn ahaa lana oran jiray #Labasuul.
Gaariga labaadna waxaa gubay nin Ethiopianku dileen oo la oran jiray Cabdiqadar #Geelegaabow.
Maxaa kadhacay isgooska cali kamiin ilaa ifka xalane ? Run ahaanti waxa dhacay dagaal aan waxba leysku reeban. Cali kamiin iyo Xamar bile waxay ku waayeen dad qaali ahaa malinti kowaad. Dadkii rasaastu dishay waxa ka mid aha Garaad oo ahaa mid kamid ah dhalinyaradi xaafada logu jeclaa.Sidoo kale waxaa malmihi ku xigay Cadowga Ethiopia ay dileen 3nin oo adeeradey ahaa iyo aabahood oo awoow ii ahaa .
Allaha unaxariistee ganacsade Maxamed aadan dhere, oo ganeey
looyaqiinay,Farmashiyena kulahaa isgooska xafada iyo Daahir aadan dheere, Cismaan aadan dheere ,nabadoon Awoowe Aadandheere, iyo Awoowe CaliSalad Barre Geedi. Run ahaanti ahaa qofkii mar walba igu dhiiri galin jiray waxbarashada maadi iyo diinta intaba.
Anigu waxan ahaa qofkii ugu danbeyey ee habeenki sabtida kasoo tagay guriga ay ku jireen.Waxaana dhacday in guriga lagala baxay kadibna lagu dilay meeshi internetka Webtel dabaqii Bin Isxaaq.
Oo aan ka fogeyn gurigii marki hore lagala baxay ,sidoo kalena hanti farabadan oo boqolaal kun ah oo tiilay Farmashiyahana way sii qaateen Ciidanki Ethiopia.
Waxaa kale isla maalmahaas waxa Isna qori Saban ah lagu dhiftay Cismaan baashaal oo Biibito kulaha xaafada mudo dheerna caan ka ahaa. Run ahaanti Cismaan dadkii meydkiisa aasay baan ka mid ahaa waana markii ugu horesay nolosheyda oo aan arko qof looqodayo god aan aheyn kii dadka lagu aasi jiray. Oo micnihii ka gadisan ma doonayo inaan kasheekeyo qaabki aynu u aasnay Rabi ha unaxariisto,waa malin murugo.
Maalmahaas madoow waxan xasuustaa ugu yaraan 50 qofood inaan aasnay dadkaasoo ubadnaa dad kasoo cararay xaafado kala duwan . Intaas iyo kabadan Iyo tiro aan xisaab laheyn oo ay bisha Cas qaaday meydkooda dadkaas waxa kujiray Ehelkeyga waalidiinteda. Oo aan raq iyo ruuxba waynay ilaa markii danbe 6/5/2007 aaynu kasoo faagnay Xabaalihii #Barakaat .
Kadib markii hal god lagu shubay 60 qof , godka kalena lagu shubay 50, mid kalena 20 qof waxan ehelkeni ka helnay godkii ay 20ka qofood kujireen. Sababta aan meeydadkaas dib ugu soo faagnay waxay aheyd inaan hubsano geeridooda kadibna aynu kusabarno.
Malintaas wa malinti noloshayda iigu qaracanka badneyd markii an Qabuurihii faagida ku bilownay oo aan 60ka qofood soo saarnay oo aan ka waynay dadkan,raadineynay. Waxan faagnay Qabri kale oo ay kujireen 20 ruux. Markii aan galnay godkii oon ciida kore ka qaadnay, Sali wayn baa Dusha ka saarnaa Meydadka. Waan ka qaadnay saligii dusha kasaaraa waxan aragnay qof dumar ah oo xijaaban oo timo dhaadheer oo Qabriga mesha ugu koreysa dhinac utaal.Waan ka soo bixinay oo qofka dumarka gooni baan u aasnay. Kadib waxan raadin ku bilownay dadki kale dhamantoodna waan helnay. Waxaana qaarkood aynu ku aqoonsanay markii aan madaxyadoodi soo fujinay oo aynu biyo ku dhaqnay.Halka kuwa kalena aan aqoonay dharkii ay wateen iyo Jeebabkooda wixii kujiray ee fureyaal ahaa.
Waxaa dhacday oo aan ila manta lasii yaabanahay qabriga 5nin oo aan kusoo faagnay aniga aya ka nool inti gudaha ugashay qabuuriga malintaas. Ragii kale iyagana rasaas unbaa dishay anigana dalka waa isaga soo tagay.Xaqiiqatan waxaad moodaa malintaas markii aan sooxusuustaba in Hilbaheyga hadba cad lajarayo.
Anigoo ahaa nin Wardhiigley kudhashay, waliba agagaarkii xafadii Cali kawaan loo yaqiinay.
Geerida iyo dhimashadu maahan mid igu cusub oo waxanba soohana qaaday xili dhiiga dadku kudaadanayey micno la,aan.
Waxaa weli horteyda kamuuqda Isla Calikamiin markii iigu horeysay noloshayda oo aan arko qof ladilayo oo horteyda lagu dilay. Waxay aheyd hooyo aan waxba galabsan galab casarkii Iyadoo BBC dhageysaneysa oo Burjiko uqaxeyso shaahna usaaranyahay, wiil yarna dhabta kuheeysa baa waxa dhacday in mesha ay soo maraan 2nin oo Shufta ah iskuna dayeen iney Radiyaha kadhacaan.
Balse way kula dhagtay Radiyihii waxaana dhabta usaaraa wiil yar oo malaha 8 ilaa 11 bilod jir ah.markii ay Radiyaha kula dhagtay 2xabo bey madaxa uga dhufteen, wayna ka baxsadeen goobta.Wiilkeedi yaraa ee dhabta usaaraa waxa uu ugurguurtay dhankii Burjikadii qaxeysay ee shaahu saarnaa balse god qashin oo kasokeyey buu kudhacay. Wali wan xasuusta wuxuu ahaa wiil yar oo gacanta midig ka go’an waxa mesha kasoo qabtay aniga hooyadey. Meydki hooyadiis oo mesha yaala baa lasoo qabtay ragii hooyadi dilay mid ka mid Isna Isla meeshii baa lagu toogtay Haanta dheer ee Xamar bile hoosteeda bey dhacdadu kadhacday xiligii adkaa ee dalku soomaray.
Qofkii labaad oo horetyda lagu dilo wuxu ahaa nin la oran jiray Bootaan Allaha unaxariiste oo loodilay xabad sigaar ah. Run ahanti Bootaan waan kanaxay oo malaha markaas 5jir baan aha xabada waxa lagula dhiftay geed aan saarnaa hoostiisa, maskaxdiisa oo faniin ah ayaa funaanadi aan watay oo dhan wada qarisay. Waan kasoo dagay geedki anigoo dawaqsan oon dul istaagay meydkisa oo lilmadu Isoo dhaaftay waayo aqoon ban ulahaa oo maalmo badan buu Buskut iyo Sisin nasiiyeyMarxuumka.Waxan waayahaas geerida ka aaminsanaa halaaga ugu daran ee qof bini adam ahi maro balse waagaas kadib geerida waxay ii aheyd sida wado qof walbo sugeysa inuu maro oo lama huraana ah.Qabuurihi aan soo qufnay waxay i Ilowsiiyeen qarow hore iyo Cabsi aan geerida aad uga baqi jiray.
Dalka #Somalia oo ah mid dhibaato lasoo daalaadhacay. Burbur Iyo dagaalo sokeeye ahli ah soo maray, mantana weli dadkii Somaliyed Iyagoon Isi saamixin in rasaas, iyo gumuc lagu sii wado.Waxay ka dhigantahay mustaqbel xumada Iyo rajabeelka dalkan dagaaladu halakeeyeen.Ciidamadii Ethiopia ee sidaas dadkeeni iyo dalkeeniba u aasay manta waa walalaheen baa raga qaar TV yada lasoo istaagayan.
Markaas beey dadka qaar Ileyihin maxaad Ethiopia kunacday ?
War hooy hurdo Habar makorisoo habaar nin qabaa mahiishee.
Ugu danbeyn waxaan dhalinyarada Somaliyed ubalan qaadayaa Inaan book ka qoro weliba Documenary kasameeyo Jiilkii ugu nasiibka xumaa uguna waqtiga adkaa ee Somalia soomara 1990 Ilaa xiligan lagu jiro.
Gen Saciid Jaamac Idaajaa
Previous articleWararka Doorashada Soomaaaliya ee dhinaca Doorashada
Next articleDictator waxa laga dhaxlo waa xabsi iyo dil ugu danbeyna bur bur horseeda wadankaas
Hogaamiyaha ku xigeenka Al-Shabaab Mahad Karate oo ugu baaqay...
War deg deg ah: dagaal Goor dhawayd ka bilaawday xaafada C/casiis...
Shacab dagan agagaarka Villa Soomaaliya oo arrin la yaab leh ka...